Igwe na-agbada ala, ntụpọ ntụpọ, ọkụ n'uko Track ọkụ - ALUDS
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ALUDS LIGHTING?
anyị nwere usoro siri ike nke njikwa mma site na akụrụngwa na ngwaahịa emechara tupu ebupu, nke a na-ewere dị ka omenala na mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ anyị.Anyị ga-ebu ọrụ maka ngwaahịa ọ bụla ma na-emeso ọnọdụ niile nke ngwaahịa anyị mere kpatara.
Anyị nwere ngwaahịa zuru oke nke akụrụngwa nke ngwaahịa anyị, nke nwere ike hụ na anyị nwere ike idobe nkwa nke oge nnyefe nke anyị na-eme ndị ahịa anyị.
N'inwe otu R&D nwere ahụmahụ, ndị etinyelarị aka na ọkụ ọkụ LED ihe karịrị afọ 10, nke na-eme ALUDS Lighting ike zuru oke ma kwanyere ùgwù ijere ndị ahịa anyị ozi oge niile.
A ga-enye ihe ngwọta ahaziri ahazi dị ka ọrụ dị iche iche chọrọ maka ndị ahịa n'ụwa niile.Anyị ga-ege ntị ma ghọta ihe ị chọrọ n'ezie, na-akwado gị na ahụmahụ na ọrụ anyị.
Ewezuga ịrụkọ ọrụ ọnụ n'ime ndị otu ALUDS Lighting, anyị nwere obi ụtọ ịnye ndị ahịa anyị ọrụ mmekọrịta, na-eji ihe niile anyị nwere ma gbalịsie ike iji kwado ndị ahịa anyị, na mmepe ngwaahịa, ntinye ọrụ na atụmatụ ọdịnihu wdg, dịka onye otu ndị ahịa.
Anyị na ndị ahịa niile na-achọ nkwado ogologo oge na-adabere na nkwado na nghọta, anyị na-elekwasị anya n'ihe anyị na-eme ma na-eme nke ọma na ọrụ anyị na-arụ, iji bụrụ nkwado ndabere gị siri ike.Anyị nọ ebe a mgbe niile!
Ngwakọta ọkwọ ụgbọ ala agbakwunyere gburugburu square edu trac...
Igwe ọkụ ọkụ na-enweghị ntụpọ AD10083
Igwe ọkụ ọkụ ọkụ nke Led Hanging Linear AB208761
Triple Isi Led Grille Downlight AG10093
Bugharịa Led Downlight AD30568
Guangdong ALUDS Lighting, onye na-emepụta na onye na-ebupụ ọkụ, na-achọ ijere ndị ahịa ozi n'ọhịa ọkụ gburugburu ụwa!
Ndị mmekọ Stratgic